Osisi Dog Brush, Pet Comb, Pet Hair Removal Glove - Kudi
Suzhou Kudi Trade Co., ltd. bụ otu n'ime ndị kasị ibu emepụta nke Pita ejiji ngwá ọrụ na retractable nkịta leashes na China na anyị na-ọkachamara na nke a gbara akwụkwọ n'ihi na ihe karịrị afọ 19. Anyị factory emi odude ke Suzhou, nke bụ naanị ọkara otu awa n'ụzọ ụgbọ okporo ígwè si Shanghai Hongqiao Airport. Anyị nwere ụlọ ọrụ aka abụọ nke kachasị maka ngwa eji egwu anụ ụlọ na nkịta nkịta a na-ewepụ anya, olu akwa na ihe egwuregwu ụmụaka nwere ngụkọta mmepụta mpaghara karịa 9000 square mita…
ihe eji eme anu ulo
ahịa ndị hụrụ n'anya
Omenala Obu Oru Okpu Dog Leash
Omenala Oru Okpukpo Udiri Ntughari 1. Eriri traction nke a na-adọta bụ eriri eriri dị larịị. Nzube a na - enye gị ohere ịgbanye eriri ahụ nwayọ nwayọ, nke nwere ike igbochi nkịta nkịta ka ọ ghara ikuku na ntanye. Ọzọkwa, imepụta a nwere ike ime ka mpaghara nke eriri ahụ dị ike, mee ka eriri traction ahụ bụrụ ihe a pụrụ ịtụkwasị obi, ma nagide ike dị ukwuu na-adọta, na-eme ka ọrụ gị dị mfe ma na-emeso gị ka nkasi obi dị elu 2.360 Celsius tangle-free omenala arọ-oru retractable nkịta leash nwere ike ...
Nhicha Slicker na-ehicha ihe maka nkịta
Nhicha nhicha onwe onye maka nkịta 1. Nke a na-ehicha ihe nhicha nke nkịta bụ nke igwe anaghị agba nchara, ya mere ọ na-adịgide adịgide. 2.The ezi kpebisiri waya bristles anyị slicker ahịhịa ezubere iji banye n'ime miri n'ime gị Pita uwe elu enweghị ọkọ gị Pita si akpụkpọ. 3. Nwepu nhicha nke onwe nke nkịta ga-ahapụkwa anụ ụlọ gị nwere uwe dị nro ma na-egbuke egbuke mgbe ejiri ya na ịhịa aka na ha ma meziwanye mgbasa ọbara. 4.With mgbe nile ojiji, nke a onwe ihicha slicker ahịhịa ga-ebelata ...
Nrụgide oru Dọkịta Ntugharị Nkịta
Nnukwu Ọrụ Nkịtị Na-adọgharị Nkịta Leash bụ nke ezigbo ABS + TPR mere, na-egbochi ikpe ikpe site na ịda na mberede. Ihe a nwere ike iji ihe ntanetị na-atụgharị uche nke nwere ike ịgbatị ruo 5M, yabụ ọ ga-abụ nchekwa karịa mgbe ị na-arụ ọrụ nkịta gị n'abalị. 3.Usoro Dg Ntughari Nkịta a na-eji mmiri siri ike na-agagharị agagharị, ruo ugboro 50,000. Okwesiri ike maka nkịta dị ike, nke dị nha na obere ...
Kedu ihe kpatara ụfọdụ nkịta ji enwekarị hyper karịa ndị ọzọ?
Anyị na-ahụ nkịta gburugburu na ụfọdụ n'ime ha yiri ka ha enweghị ume na-enweghị njedebe, ebe ndị ọzọ na-ala azụ. Ọtụtụ ndị nne na nna na-ahụ maka anụ ụlọ na-adị ngwa ịkpọ nkịta ha nwere ume dị elu "akwa," gịnị kpatara ụfọdụ nkịta ji enwekarị mmụọ karịa ndị ọzọ? Characteristicsdị njirimara Ndị ọzụzụ atụrụ German, Collies Border, Golden Retrievers, Si ...
Ihe I Kwesịrị nema Banyere Aka Aka Gị
Ọsụsọ na-agba na ụkwụ nkịta gị. Nkịta na-emepụta ọsụsọ n'akụkụ ụfọdụ nke ahụ ha na - enweghị ajị anụ, dị ka imi na mpe ụkwụ. Dịkwa ka ụmụ mmadụ, mgbe nkịta na-atụ ụjọ ma ọ bụ na-echegbu onwe ya, ...
Nkịta na-ehi ụra ọnọdụ
Onye ọ bụla nwe anụ ụlọ chọrọ ịmatakwu banyere nkịta ha, banyere ọnọdụ ụra ha kachasị amasị nkịta ha. Ọnọdụ nkịta na-ehi ụra, na oge ha na-ehi ụra nwere ike ikpughe ọtụtụ ihe banyere mmetụta ha. Ndị a bụ ụfọdụ ọnọdụ ihi ụra nkịtị na ihe ha nwere ike ịpụta. N'akuku ...
Lekwasị anya na ndị ọkachamara,
Mee Ka Ndụ Anyị Ka Mma!
Suzhou Kudi Trade Co., Ltd. bụ otu n'ime ndị kasị ibu emepụta nke Pita ejiji ngwaọrụ na China.
Factorylọ ọrụ ahụ dị na Wangshan Industry Park, Wuzhong District, Suzhou, China,
nke ruru ihe karịrị puku mita ise.